သင်မှားနေပြီ၊ လူမှုမီဒီယာသည် SEO အပေါ်အဘယ်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၄ ခုရှိသည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 8, 2015 Douglas Karr
ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအငြင်းအခုံကိုငြိမ်သက်စေနိုင်မလား။ လူမှုရေးမီဒီယာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ နားမလည်ဘဲမကောင်းသောနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုသောပညာရှင်အချို့ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ Social သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေသည့်မြှင့်တင်ရေးနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောထိတွေ့မှုကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ သူတို့ကိုအားလုံးကိုမထည့်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လူမှုရေးကွန်ရက်နဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုမျှဝေချင်တာမဟုတ်တဲ့ SEO ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီကဆူညံသံအများစုဟာလာနေတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ကြီးမားတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတယ်။
တကယ်တော့ဒီ post ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ဝက်ဘ်တစ်ခွင်၌လူမှုရေးသတိပေးချက်များတပ်ဆင်ထားသည်၊ အထူးသဖြင့်ရောင်းချသူများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်နည်းပညာများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရေးသားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီဆိုဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးမကြာခဏငါတို့နောက်လိုက်များအတွက်အကြောင်းအရာ curate ။ ဤကိစ္စတွင်၊ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်ထိုသတိပေးချက်တစ်ခုမှမတွေ့ပါ။ ငါ site တစ်ခုပေါ်တွင်အခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေစဉ်, အောက်ဖော်ပြပါ infographic ၏ကြိုတင်ကြည့်ရှုဆက်စပ်သောပို့စ်များကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပြသခဲ့သည်။ ငါထို့နောက် infographic ဖတ်ပါကကြီးမြတ်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါထို့နောက် infographic ၏အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေ Google မှပြန်သွားလေ၏ SMO Submitedge, နှင့် infographic တွေ့ရှိခဲ့, သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို SEO နှင့်လူမှုမီဒီယာကမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။.
ဒါကြောင့် Submitedge SMO ရဲ့သူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသွယ်ဝိုက်မြှင့်တင်ဖို့လူမှုရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကသူတို့ကိုအားဖြည့်ပေးတယ်။ သူတို့ရဲ့စာမျက်နှာကိုနောက်ခံကျောထောက်နောက်ခံပေးတဲ့အရာကသူတို့ကို bailiwick နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ စန်း! သူတို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာသူတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုမျှဝေမပေးဘူးဆိုရင်ငါသူတို့ကိုဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ သူတို့ကဒီအချက်အလက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မည်သည့်အသုံးအနှုန်းကိုမှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါရှာတွေ့နိုင်မဲ့အခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတော့မပြောသင့်ပါဘူး။
သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် SEO နှင့် Social Media ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီကဏ္နှစ်ခုလုံးဟာဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်အောင်ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့တူတယ်။ သို့သော်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထောက်ပြသူများကသင်၏အဆင့်တွင် Social Media နှင့် SEO ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို SEO နှင့်လူမှုမီဒီယာကမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
Link အလားအလာ - ကျွန်ုပ်၏အထက်ပါဥပမာသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံသောသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုလူမှုရေးအရဖြန့်ကျက်ခြင်းကသင်၏အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်များသို့မြှင့်တင်ပေးသည်။ ၎င်းကိုအခြားသူများမှမျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းဆိုပါကသင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
personalization - ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းကိုတစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးသော်လည်းရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုဂူဂဲလ်သို့ ၀ င်ရောက်သူတိုင်းအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်မဟုတ်သောလူတိုင်းအတွက်နေရာချထားသောကြောင့်၎င်းသည်ရှာဖွေသူတိုင်းထံတင်ပြသောအမှန်တကယ်ရလဒ်များနှင့်ကွဲပြားသည်။ လူမှုရေးအရထိတွေ့ဆက်ဆံခံရသောအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသောပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေကြသည်။ ထိုရလဒ်များသည်သင်၏အားထုတ်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည် - သင့်အားပိုမိုတိကျပြတ်သားသောမြင်သာမှုပေးသည်။
Query Volume ကိုရှာပါ - တဖန်လူမှုရေးလောက၌သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုစတင်ရယူခြင်း (သို့) ပိုမိုကျယ်ပြန်သောပရိသတ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးအသိအမှတ်ပြုခြင်းက ၀ ယ်သူများကိုသင့်အားဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ဒီဘလော့ဂ်နှင့်ငါ့အရုပ်ဆိုးခွက်ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာပါ! ဒါကြောင့်ငါ့မျက်နှာနေရာတိုင်းမှာ - မင်းကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလား))
အမှတ်တံဆိပ်အချက်ပြမှု - Google ၏ algorithm တွင်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့် algorithm အပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုများကြောင့်ကျောင်းဟောင်း SEO SEO ၏အားသာချက်များသည်ရည်ညွှန်းချက်များ၏သက်ရောက်မှုများကိုလင့်ခ်များ၏ဆက်စပ်မှုကိုအတည်ပြုရန်အလွန်အမင်းလျှော့တွက်နေကြသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ နောက်ဆုံးမှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်၊ ထုတ်ကုန်အမည်၊ ၀ န်ထမ်းအမည်၊ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များသည်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များအားလုံးတွင်၎င်းတို့ကိုရယူခြင်းသည်သင်၏တည်ရှိမှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုမှန်ကန်စေသည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာခေတ်သစ်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များသည်၎င်းအကြောင်းအရာများကိုရရှိသည့်နှင့်ပိုင်ဆိုင်သည့်မီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပြသရန်အကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ကျက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ မကြာခဏပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဟာဗျူဟာမှတဆင့်။ ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့်ရေးသားထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်သြဇာရှိတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာမျှဝေထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအချိတ်အဆက်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အလားအလာကိုတိုးမြှင့်ဖို့လူမှုရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်။ Hmmm …ဒါဆို social media ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဟုတ်ကဲ့၊
Tags: လူမှုရေးသက်ရောက်မှုရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုရှာဖွေပါရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လူမှုရေး vs ရှာဖွေရေးseoseo နှင့်လူမှုရေးseo မဟာဗျူဟာများလူမှုရေး vs seoလူမှုရေးနှင့်ရှာဖွေရေးလူမှုရေးနှင့် seoလူမှုရေးသက်ရောက်မှုဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာများလူမှုရေးမဟာဗျူဟာများseo နှိုင်းယှဉ်လူမှုရေးseo လူမှုရေးစိုင်းထီးဆိုင်
8:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 17
Nice တ ဦး တည်း Doug ။ ထိုအရာကလူမှုရေးဆိုင်ရာ SEO ဆိုင်ရာအမြင်နှစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုထင်ပါသည်။ (သင်အမှန်တကယ်မဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြပါစို့။ အခြားဘာတွေလဲ။ ):
ငါနံပါတ် ၁ နဲ့သဘောတူတယ် ဂူးဂဲလ် + လုပ်ဆောင်မှုအချို့ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်နံပါတ် ၂ နှင့်သဘောမတူပါ။
8:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 23
လုံးဝအင်ဒရူးသဘောတူသည် ငါသည်ငါ့ post ကိုအတွက်ရှင်းလင်းစေသင့်ပါတယ်။ IMO၊ မင်းကသင်၏လူမှုရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုမလုပ်ဆောင်လျှင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ IMO နှစ်ခုလုံးကိုသင်ကျွမ်းကျင်ရမည်။
9:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 51
ကောင်းပြီ၊ ခင်ဗျားဟာတကယ်တော့ clickbait master ပဲ
9:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 35